Nomad Green: Takiana ny Fanentanana Misimisy Kokoa Momba ny Fiarovana ny Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2018 18:05 GMT
Byambadolgor M. , mpianatra amin'ny taona voalohany ao amin'ny departemanta fandidiana fanatsaràna endrika, no milaza ny heviny fa tokony hampitsahatra ny fanipatsipazana fako en rehetra eny ireo mponina ao Mongolia ary tokony hanomboka hitandrina ny tontolo iainana. Mpianatra taona faharoa amin'ny Sarimihetsika, Munkhtsatsral B, no mamaritra fa:
Milaza i Mungunshagai N., mpianatra amin'ny anjerimanontolo NBB, fa misy karazam-biby dimy ahiana ho lany tamingana ao Mongolia – bera Gobi, rameva dia, leopara dia, antilopa Mongoliàna ary diera fakàna ‘musk’ (fanaovana hanitra) . Atahorana noho ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny firongatr'ireo mpihaza izy ireo ary mila manao izay azo atao izao tontolo izao hiarovana azy. I Budragchaa S. mitafatafa amin'Atoa Erdenebayar, lehiben'ny ONG “Gobi Bear” , izay milaza fa:
Nandika tafatafa hafa nifanaovana tamin'Atoa Batsaikhan i Mongoloo. Hoy izy:
Mampatsiahy i Tuul D, mpianatra amin'ny taona voalohany amin'ny departemanta fianarana ny teny Rosiana fa ny ahitra sy ny zavamaniry no tena harenan'ny lemaka mongola. Saingy mampihena an'ireo firaofana ny fivadihana ho tany efitra ary maty ireo zavamaniry. Antony iray hafa mahatonga ny fahasimban'ireo ahitra sy ireo renirano ny fitrandrahana volamena ataon'ireo mpitrandraka tsy matianina antsoina hoe Ninjas. Mangady tany ireo olona ireo, miaina ho toy ny tany tsy misy lalàna ary mitady volamena any anatin'ireo saha fitrandrahana tranainy / efa nampiasaina.
Milaza i Bathishig Sh. avy amin'ny Anjerimanontolo “Siti Institute” fa manana farihy miisa 3811 i Mongolia, loharano 7000, renirano 3500, ranomandry 187 ary loharano ambanin'ny tany miisa 139. Simba ny rano ety amin'ny faritra ambonin'ny tany noho ny tombontsoan'ireo olona sasantsasany. Milaza i Bathishig fa:
Sarihan'ilay mpanao gazety Enkhjargal. Ch. ny saina hibanjina ny fitomboan'ny fandotoana ny rivotra iainana ao Ulaanbaatar, renivohitr'i Mongolia. Mandray fepetra ny governemanta mba hanerena ny fampiasana solika tsy manimba loatra ny tontolo iainana ho fanafanàna, mampihena hatramin'ny 50% ny fandotoana ankehitriny. Na izany aza, tena ilaina ny fanentanana eo anivon'ny mponina momba azy io.
Pearly Jacob, mpanao gazety iray miasa tena, mitantara ny fomba hiatrehan'i Mongolia ny fanamby amin'ny fanomezana fidirana mitovy ho an'ireo olona kilemaina.
Anisany iray amin'ireo olompirenena mpanao gazety malaza indrindra ao amin'ny Nomad Green i Rtoa. Bor. Mitatitra izy hoe:
Mampatsiahy i Enkhbayar Erdene-ochir, mpianatra amin'ny taona voalohany momba ny maritrano fa: